“လျှပ်စစ်သုတ – ၁ ( ဓါတ်လိုက်ခြင်း )” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “လျှပ်စစ်သုတ – ၁ ( ဓါတ်လိုက်ခြင်း )”
“လျှပ်စစ်သုတ – ၁ ( ဓါတ်လိုက်ခြင်း )”
Posted by Swal Taw Ywet on Sep 11, 2012 in Creative Writing, Education, Environment | 33 comments
၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ ထုတ် ပြည်သူ့ခေတ် ဂျာနယ် အတွဲ ၃၊ အမှတ် (၁၁၀) ပါ ဒေါက်တာဒေါ်မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့ “ ပညာဟူသည် မြတ်ရွှေအိုး” ဆိုတဲ့ အခန်းဆက် ဆောင်းပါးထဲမှာ လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတမဲ့မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဓါတ်လိုက်လို့ လူတွေသေရတဲ့အကြောင်း ဥပမာပေး High Light လုပ်ထားတာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ စွယ်တော်ရွက် ကိုယ်တိုင်လည်း ဒီလျှပ်စစ်လောကထဲမှာ ကျင်လည်နေရသူ အထူးသဖြင့် သင်ကြားရေးနယ်ပယ်မှာ လှုပ်ရှားနေရသူတစ်ဦးဖြစ်လို့ တာဝန်မကင်းဘူးလို့ ခံစားရလို့ ဒီစာစုလေးတွေ ရေးဖြစ်တာပါ။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့ မန်းဂဇက် ရွာသူရွာသားတွေနဲ့ လာလည်ကြ သူတွေအတွက် ဗဟုသုတအဖြစ် တစ်ခုခုရသွားစေချင်တဲ့စေတနာနဲ့ပါ။ သိပြီးတတ်ပြီးသားသူတွေ ခွင့်လွှတ်ကြပါနော။ လျှပ်စစ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ကျနော်နားလည်ထားတာလေးတွေကို အရပ်သားစကားနဲ့ ရိုးရိုးလေး ပြောပြပါရစေ။ ၀ိုင်းဝန်းဖြည့်စွက် ဆွေးနွေးခြင်းကနေ ပိုပြည့်စုံတဲ့ ပို့စ် တစ်ခုဖြစ်လာဖို့ ရည်မှန်းပါတယ်။
ကဲ အစပျိုးထားခဲ့တဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်မှုကနေပဲ စလိုက်မယ်။
ဓါတ်လိုက်မှုကို အင်္ဂလိပ်လို Shock လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၀မ်းလျှောတဲ့အခါ ကိုယ်အတွင်းရေဓါတ်ဆုံးရှုံးမှု များလွန်းလာတဲ့အခါ သွေးထွက်လွန်တဲ့အခါ ဖြစ်သွားတတ်တဲ့ သွေးလန့်ခြင်း လို့ ဘာသာပြန်ထားတဲ့ Shock နဲ့ စာလုံးပေါင်းခြင်းတူပါတယ်။ မုံရွာမှာခင်ခဲ့တဲ့ လူငယ်ဆရာဝန်လေးတွေ အုပ်စုကတော့ အတိုမှတ်ရလွယ်အောင် S (Sweating) ချွေးစေးပြန်ခြင်း၊ H (Heart Beat) နှလုံးခုန်နှုန်းနှေး?/မြန်?သွားခြင်း၊ C (Cold) အရေပြား အေးစက်နေခြင်း၊ စသည် စသည်ဖြင့် လက္ခဏာတွေ အကြမ်းဖျင်းတူတယ်လို့ ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ (ရွာထဲက မမ ပဒုမ္မာတို့ Dr. AKKO တို့ ၀ိုင်းဖြည့်ပေးကြပါဦးနော်)
လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်းဆိုတဲ့ Shock ကတော့ ကိုယ်ခန္တာအတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခြင်းကို ခေါ်တာပါ။ ဒီမှာ ဟိုးအရင်လျှပ်စစ် ပို့စ် တစ်ခုမှာ ရေးခဲ့ဖူးသလို မင်းသားကြီးကတော့ လျှပ်စီးကြောင်း Current ပါပဲ။ ကိုယ်ခန္တာအတွင်း ဖြတ်စီးသွားတဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းပမာဏ၊ ကြာချိန်နှင့် ဖြတ်စီးသွားတဲ့နေရာပေါ် မူတည်ပြီး အသက်အန္တရာယ် ထိခိုက်စေတာပါ။ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေး (အများအခေါ် EI) ကပို့ချတဲ့ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် အခြေခံသင်တန်း သင်တန်းမှတ်စုထဲမှာ ဒီလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။
၁ ၁ မီလီအမ်ပီယာ ကိုယ်ခန္တာတွင်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းပင်မသိရှိနိုင်ပါ။
၂ ၁-၈ မီလီအမ်ပီယာ ကိုယ်ခန္တာတွင်လျှပ်စစ်စီးကြောင်းသိရှိမည်ဖြစ်သော်လည်း နာကျင်မှုမရှိ။
၃ ၈-၁၅ မီလီအမ်ပီယာ ကိုယ်ခန္တာအစိတ်အပိုင်းတို့တွင် နာကျင်ခြင်း ထုံကျင်ခြင်းခံစားရမည်။
၄ ၁၅-၂၀ မီလီအမ်ပီယာ အသက်ရှူရှိုက်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါသည်။
၅ ၁၀၀-၂၀၀မီလီအမ်ပီယာ လူ့ခန္တာကိုယ် ချုပ်ငြိမ်းစေနိုင်ပါသည်။
ဓါတ်လိုက်မှုဖြစ်ပွားပါက ရှေးဦးစွာ ဓါတ်လိုက်ခံရသူအား ဓါတ်လိုက်သည့်အရာမှ လွတ်ကင်းအောင် ဦးစွာလုပ်ဆောင်ရပါမယ်၊ မိန်းချတာ၊ ဓါတ်ကြိုး/လျှပ်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ လွတ်သွားအောင်လုပ်တာ စသည်ဖြင့် အရင်လုပ်ပြီးမှ ထိတွေ့ကိုင်တွယ်နိုင်မှာပါ။ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့် အချိန်မှီ ပြုစုနိုင်မှသာလျှင် နှလုံးပြန်လည်အလုပ်လုပ်ပြီး အသက်ရှင်ရန် ရာနှုန်းများမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်လိုက်ခံရသူအတွက် အသက်ရှင်နိုင်မည့် အခြေအနေဟာ ဓါတ်လိုက်ခံရပြီး အချိန်မည်မျှအကြာတွင် ပြုစုကုသမှု ခံယူရသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်နေပါသေးတယ်။ လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် အခြေခံသင်တန်း သင်တန်းမှတ်စုထဲမှာ ဒီလိုဖေါ်ပြထားပါတယ်။
စဉ် ဓါတ်လိုက်ခံရပြီးနောက်ပြုစုနိုင်မည့်အခြေအနေ ကယ်တင်နိုင်မည့် ရာခိုင်နှုန်း
၁ ၂ မိနစ်အတွင်းပြုစုခဲ့လျှင် ၁၀၀ မှ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း
၂ ၂-၄ မိနစ်အတွင်းပြုစုခဲ့လျှင် ၉၀ မှ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း
၃ ၄-၆ မိနစ်အတွင်းပြုစုခဲ့လျှင် ၅၀ မှ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း
၄ ၁၀ မိနစ်ထက်ကျော်လွန်ပါက လုံးဝမျှော်လင့်ချက်မရှိ
ဓါတ်လိုက်ခံရမှုဆိုတာ ကိုယ်ခန္တာအတွင်း လျှပ်စစ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုလို့ပြောထားပြီးသားပါ။
လျှပ်စစ်သဘောအရ လျှပ်စီးကြောင်း (Current) ဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုရင် (၁) လျှပ်စစ်တွန်းအား (Electro Motive Force-EMF) ရှိရပါမယ်။
(၂) ပတ်လမ်းပြည့် (Closed Circuit) ဖြစ်ရပါမယ်။
အဲဒီ့ ၂ ခုပြည့်စုံလို့ လျှပ်စစ်စီးရင် အစီးခံပစ္စည်းရဲ့ လျှပ်စစ်ခုခံမှု Resistance ပေါ်မူတည်ပြီး လျှပ်စီးပမာဏ အနည်းအများ ကွာခြားပြီးစီးဆင်းပါမယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် လျှပ်စစ်ခုခံမှု (Body Resistance) ခြင်း မတူနိုင်ပါခင်ဗျား။
ဓါတ်လိုက်တယ်ဆိုရာမှာ နှလုံး (Heart) ကိုဖြတ်ပြီး လျှပ်စစ်စီးဆင်းသွားနိုင်တဲ့ အနေအထားဟာ အန္တရာယ် အကြီးဆုံးပါပဲ။ ဥပမာ ဘယ်ဖက်လက်က ဓါတ်ကြိုးကိုကိုင်မိတဲ့အချိန် ညာဖက်ခြေထောက်က မြေဓါတ်ထိနေတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာ လျှပ်စီးကြောင်းက ဘယ်ဖက်လက်ကစီးဝင်ပြီး ညာဖက်ခြေထောက်က တဆင့် မြေကြီးထဲစီးဝင်သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းမှာ နှလုံးကို တည့်တည့်ဖြတ်စီးသွားရတော့မှာလေ။ ဆွေးနွေးခဲ့ဖူးတဲ့ဆရာဝန်တွေအဆိုကတော့ လိုတိုရှင်း ပြန်ပြောရရင် နှလုံးမှာ သူ့စည်းချက်နဲ့သူ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ Mechanism ရှိတယ်။ လျှပ်စစ်ဖြတ်စီးသွားတဲ့အခိုက်အတန့်မှာ အဲဒီ့ Mechanism ပျက်စီးသွားတယ်။ လူတစ်ကိုယ်လုံးအတွက် အဓိက ထိန်းချုပ်နေရာဖြစ်တဲ့ ဦးနှောက်ကို သွေးမရောက်တော့ဘူးဆိုရင် ဦးနှောက်ကနေ ခန္တာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ပို့ပေးနေတဲ့ အမိန့်စေခိုင်းမှုတွေ ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး အသက်သေဆုံးသည်အထိ ဖြစ်သွားစေတော့တာပါပဲ တဲ့ခင်ဗျ။ ( အသေးစိတ် သိသူများ ၀ိုင်းဝန်းဖြည့်စွက်ပေးပါ ခင်ဗျ )
ပိုပြီးမြင်သာအောင် ဥပမာလေးထပ်ပေးပါဦးမယ်။ (လက်တွေ့စမ်းသပ်မကြည့်ပါနဲ့နော့၊ တကယ်လို့စမ်းချင်တယ်ဆိုလည်း စွယ်တော်ရွက် ထံကိုလာ ခဲ့ပါ။ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြပါ့မယ်။)
အိမ်တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ပလပ်ပေါက် (အင်္ဂလိပ်လို မူရင်းက Socket လို့ခေါ်ရမှာ၊ ပလပ် (Plug) ထိုးရတဲ့အပေါက်မို့ ပလပ်ပေါက်လို့ မြန်မာမှုပြုထားခဲ့ကြတာ) ကိုသိတယ်ဟုတ်? အဲဒီ့ပလပ်ပေါက်က အပေါက်လေး ၂ ပေါက်ထဲကို လက်ညှိုးနဲ့ လက်ခလယ် ထည့်ကြည့်လိုက်ရင်…………
အပေါက်သေးသေးလေးတွေမို့ ထည့်လို့ရမှာမဟုတ်ပါ။ ၀က်အူလေးကို လှည့်ဖြုတ်ပြီး အဖုံးဖွင့်လိုက်မှသာ အထဲမှကြေးဘားများကို မြင်တွေ့နိုင်ပါမယ်။ ကဲ.. ပလပ်ပေါက်ကို အဖုံးဖြုတ်ထားပြီးသားဆိုရင် အထဲမှာ ကြေးဘား ၂ခု တွေ့လိမ့်မယ်။ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်တံ Tester နဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရင် ကြေးဘား ၁ခုက မီးလင်းစေပြီး နောက်၁ခုက မီးမလင်းတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ Tester မီးသီးလင်းစေတဲ့ကြိုးကို အပူကြိုး (၀ါ) Live Wire (၀ါ) Phase ကြိုးလို့ခေါ်နေကြတာပေါ့။ ဓါတ်လိုက်စေနိုင်သော ကြိုးဆိုတာ အဲဒါလေ…။ အနီရောင်ကိုသာ အများဆုံးသုံးလေ့ရှိလို့ အနီကြိုးလို့လည်း ခေါ်ကြပါရဲ့။ Tester မီးသီးမလင်းစေနိုင်တဲ့ ကြိုးကို အအေးကြိုး (၀ါ) အနက်ကြိုး (၀ါ) Neutral Wire လို့ ခေါ်တာပါ၊ ရပ်ကွက် Transformer ရဲ့ အထွက်မှာကတည်းက ဘေးကင်းစေဖို့ ဗို့အားလုံးဝမရှိရအောင်လို့ မြေဓါတ်ချခြင်း (Earthing) လုပ်ပေးထားခဲ့တာမို့ပါ။ Tester နဲ့စမ်းရင် မီးလင်းတဲ့ အပူကြိုးကို လက်ညှိုးနဲ့၊ မီးမပြတဲ့ အအေးကြိုးကို လက်ခလယ်နဲ့ ထိကြည့်လိုက်ရင် ဓါတ်လိုက်သွားမှာပေါ့။ ဒါပေသိ လျှပ်စီးကြောင်းက လက်ညှိုးကနေ၀င်လာပြီး လက်ခလယ်ကနေ ပြန်စီးထွက်သွားတော့………….. မသေနိုင်ဘူးလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျင်လည်းကျင်၊ နာလည်းနာတဲ့ ကျင်နာမှု (ကြင်နာမှုမဟုတ်ဖူးနော်) ကိုခံစားလိုက်ရပါလိမ့်မယ်။ “ELECTRICITY IS VERY KIND.” ဆိုတာလေးကိုတောင် သတိရမိပါရဲ့။
ကဲ.. ကဲ.. ဓါတ်လိုက်မှု Shock ဆိုတာလေးကို ရေးရေးတော့ သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့။
ဆက်ကြဦးစို့… ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာပေါ့။ အထက်မှာပြောထားပြီးသား လျှပ်စီးကြောင်း Current ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်ချက်လေးတွေဆိုတာလေ.. (၁) က လျှပ်စစ်တွန်းအား (EMF) ရှိရပါမယ်တဲ့။ ဓါတ်မလိုက်အောင် (၀ါ) ကိုယ်ခန္တာကိုဖြတ်ပြီး လျှပ်စစ်ဓါတ်မစီးအောင် ဆိုရင် အဲဒီ့ လျှပ်စစ်တွန်းအားကို အရင် ဖယ်ထားလိုက်ရင် ရနိုင်တာပေါ့နော… ခလုပ်ပိတ်ပြီးမှ ကိုင်တွယ်ဖို့ ပြုပြင်ဖို့ သတိထားလိုက်လေ။ မီးခလုပ် (Switch) က ဓါတ်လိုက်နိုင်တဲ့ကြိုး (၀ါ) အပူကြိုးကိုပဲ ဖြတ်ထားဖို့ (တနည်း) စံနစ်တကျ မှန်မှန်ကန်ကန် တပ်ဆင်သွယ်တန်းထားဖို့လည်း လိုသေးတယ်နော်။ ခလုပ်ပိတ် ( Switch OFF ) ထားတော့ လျပ်စစ်တွန်းအားမရှိတော့လို့ လျပ်စစ်စီးဆင်းခြင်းမဖြစ်နိုင်၊ ဓါတ်မလိုက်တော့ဖူးပေါ့။
လျှပ်စစ်စီးဖို့ လိုအပ်ချက် (၂) ဖြစ်တဲ့ ပတ်လမ်းပြည့် (Closed Circuit) ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလေးကို ကြည့်ရအောင်။ ဓါတ်လိုက်မှု ဥပမာပေးထားခဲ့တဲ့ လက်ညှိုးက၀င် လက်ခလယ်ကစီးထွက်ဆိုတာလေးကို မှတ်မိတယ်ဟုတ်? အခုဒီမှာ အသေးစိပ်ချဲ့ရေးမှာမို့ ချန်ထားခဲ့သေးတာက မြေဓါတ်လွတ်အောင်နေရန်လိုအပ်မှုပါ။ မြေကြီးပေါ်မှာ ဖိနပ်မပါပဲရပ်ပြီး ပလပ်ပေါက်ထဲ လက်ညှိုး၊ လက်ခလယ် ထည့်ကြည့်လိုက်ရင် လက်ညှိုးက၀င်တဲ့ လျှပ်စီးကြောင်းက လက်ခလယ်က ပြန်ထွက်သွားရုံတင်မကပဲ ခြေထောက်ကပါ ပြန်ထွက်သွားနိုင်သေးတယ်လေ။သေသွားနိုင်တယ်ခင်ဗျ။
မြေဓါတ်ကင်းလွတ်နေအောင် လျှပ်စစ်ဓါတ်မစီးနိုင်တဲ့ လျှပ်ကာပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ ပလပ်စတစ်ခုံပေါ်မှာထိုင် ခြေထောက်ကို မြေကြီးနဲ့ မထိအောင် မ တင်ထားပြီး လက်ညှိုးတစ်ချောင်းတည်းနဲ့ အနီကြိုး (၀ါ) အပူကြိုးကို ထိကြည့်လိုက်ရင် ………………… ဘာမှမဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ ပလပ်ပေါက်မှာရောက်နေတဲ့ အပူကြိုး (၀ါ) ဓါတ်လိုက်နိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်က လက်ညှိုးကတဆင့် ကိုယ်ခန္တာအထိ ရောက်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် စီးဆင်းမှု Current မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။လျပ်စစ်ဓါတ်ဟာ ခန္တာကိုယ် အထိရောက်နေပေမယ့်ဆက်လက်စီးဆင်းသွားဘို့နေရာရှာမတွေ့တော့ဘူးလေ၊ မြေဓါတ်နဲ့ကင်းလွတ်နေတာကိုး။ အဲဒီ့အချိန် အဲဒီ့ပလပ်ပေါက်ထဲ လက်ထည့်ထားသူရဲ့ ကိုယ်ခန္တာကို Tester နဲ့ ထောက်ကြည့်ရင် မီးလင်းနေတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘေးကတစ်ယောက်ယောက်က မြေကြီးပေါ်ကနေရပ်ရင်း အဲဒီ့ပလပ်ပေါက်ထဲ လက်ထည့်ထားသူရဲ့ ကိုယ်ခန္တာကို သွားထိမိရင် ၂ယောက်စလုံးဓါတ်လိုက်ခံကြရမှာပါ။ပတ်လမ်းပြည့် ဖြစ်သွားတာကိုး၊ လျပ်စစ်စီးပြီပေါ့ဗျာ။
ကျောင်းမှာလက်တွေ့လုပ်ကြတုန်းက တစ်ယောက်က သစ်သားခုံပေါ်တက်ရပ်ပြီး အပူကြိုး( ၀ါ ) Phase ကြိုးကို ကိုင်ထားတုန်း တခြားလူတွေက Tester တွေနဲ့ ၀ိုင်းထောက်ကြည့်ကြတာလေ၊ နှာခေါင်းကို ထောက်တဲ့သူက “နှာခေါင်းမီးတောက်တဲ့သူတွေ့ပြီဟေ့ ”လို့ အော်လေ့ရှိတဲ့ လက်တွေ့သရုပ်ပြလေးတွေကို လွမ်းမိပါ့။
ပတ်လမ်းမပြည့်ရင်/ Closed Circuit မဖြစ်ရင် လျှပ်စစ်မစီးနိုင်ဘူးဆိုတာ သိပြီပေါ့နော်။
ဓါတ်လိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ် ရှိ မရှိ ကို မိမိကိုင်တွယ်အလုပ်လုပ်မယ့် လျပ်စစ်ပစ္စည်းရဲ့ ကိုယ်ထည်ကို လက်ပြန်
( လက်ဖမိုးနဲ့ ) ထိခတ်ကြည့်ခြင်းဖြင့်လည်း စမ်းသတ် သိရှိနိုင်ပါသေးတယ်၊ လက်ဖ၀ါးနဲ့တော့ သွားမကိုင်ပါနဲ့နော်-မတော် ဓါတ်အားရှိနေလို့ ဓါတ်လိုက်ခဲ့ရင် အကြောတွေရဲ့တည်ဆောက်ထားပုံအရ ဆုတ်ကိုင်လိုက်သလိုဖြစ်သွားပြီး လျပ်စစ်ဖြတ်စီးချိန် ပိုကြာသွားမှာမို့လို့ပါ။ “ဓါတ်ကြိုးကြီးကိုင်လျက်သားနဲ့သေနေတယ်”-“ ဆွဲအားနဲ့တွေ့သွားလို့ သေသွားတာ၊ တွန်းကန်အားနဲ့တွေ့ရင်မသေဘူး” ဆိုတာလေးတွေ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ကြားဖူးကြတယ်ဟုတ်? ကြုံတုံးလေး ကျနော်သိတာလေး ပြောပါရစေ။ ဓါတ်လိုက်တာမှာ တွန်းကန်အား နဲ့ ဆွဲငင်အား လို့ ၂ မျိုးမရှိပါ၊ လျပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းခြင်းသာ ရှိကြောင်းပါ ခင်ဗျ။ လက်ဖမိုးနဲ့ထိကြည့်လိုက်ချိန် ဓါတ်အားရှိနေခဲ့ရင် လျပ်စစ်ဓါတ် ဖြတ်စီးတာနဲ့တပြိုင်နက် အကြောတွေရဲ့တုန့်ပြန်မှု အရ ဝေးရာကိုတွန်းလွှတ်လိုက်သလို ဖြစ်သွားလို့ အန္တရာယ်လျော့နည်းသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှုတွေရဲ့ အများစုက ဓါတ်အားရှိတဲ့ကြိုးနဲ့ မြေဓါတ်အကြား လူရောက်သွားလို့ လျှပ်စစ်ဖြတ်စီးပြီး သေဆုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။ EPC ကပို့ပေးနေတဲ့ အနီနဲ့ အနက်အကြား (၀ါ) အပူကြိုးနဲ့ အအေးကြိုးအကြား ဖြစ်ပွားတာ နည်းပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြေဓါတ်ဆိုတာက နေရာတကာမှာရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြမ်းခင်းမှာရှိတယ်၊ နံရံမှာရှိတယ်။မျက်နှာကျက်မှာရှိတယ်။ စိုစွတ်တဲ့နေရာတွေဆို လျှပ်စစ်ခုခံမှု ပိုနည်းလို့ ဓါတ်လိုက်မှုဖြစ်ရင် လျှပ်စီးကြောင်းပိုစီးနိုင်တာမို့ အန္တရာယ်ပိုကြီးတာပေါ့ဗျာ။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဓါတ်လိုက်မှုမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ရာမှာ မြေဓါတ်မှ ကင်းလွတ်နေပါစေဆိုတဲ့ အချက်လေးတစ်ခုကို လိုက်နာသတိပြုစေချင်တာပါ။ အိမ်ရှင်မတွေ ကြုံရလေ့ရှိတဲ့ အများဆုံး ဓါတ်လိုက်မှုက ဘယ်နေရာမှာလဲ? ဝေကျနေတဲ့ ထမင်းအိုးအဖုံးကို လှပ်လိုက်ရတဲ့ လျှပ်စစ်မီးဖိုနေရာမှာဟုတ်?… မြေကြီး/ သံမံတလင်းပေါ်မှာ ရပ်တာမဖြစ်ရအောင် သစ်သားခုံလေး ၂ လက်မ အမြင့်လောက်လေးလုပ်ထားပြီး အဲဒီ့ပေါ်မှာ ရပ်ပြီးချက်ရင် အန္တရာယ်ပိုကင်းသွားမှာပေါ့ဗျာ။ လျှပ်စစ်ဓါတ်မစီးနိုင်တဲ့ ရာဘာပြားလေးတွေ ခင်းထားရင်ဖြစ်စေ၊ မီးဖိုထဲမှာ ရာဘာဖိနပ်ထူထူ စီးတဲ့အကျင့်လုပ်ထားရင်ဖြစ်စေ၊ မီးဖိုချောင်သုံးလက်အိတ်စွပ်တဲ့ အကျင့်လုပ်ထားရင်ဖြစ်စေ ဓါတ်လိုက်မှု အန္တရာယ်က ကင်းဝေးစေနိုင်မှာပါ။
လျှပ်စစ်သုံးပစ္စည်းတွေရဲ့ အတွင်းပိုင်းချို့ယွင်းမှုကြောင့် မီးပူ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ အ၀တ်လျှော်စက် စတာတွေရဲ့ သတ္ထုကိုယ်ထည်ကို ဓါတ်အားရောက်နေပြီး အန္တရာယ်ပြုတာမျိုးကိုတော့ အဲဒီ့ သတ္ထုပစ္စည်းတွေမှာ မြေဓါတ်ချကြိုး (Earth Wire) စံနစ်တကျ တပ်ဆင်ပေးထားခြင်းနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ပစ္စည်းချို့ယွင်းလို့ သတ္ထုကိုယ်ထည်ကို ဓါတ်အားရောက်သွားတာနဲ့ တပြိုင်နက် မြေကြီးထဲ လျှပ်စစ်စီးဝင်ပြီး ဖြူးစ် (Fuse ) ပြတ်တာ၊ Circuit Breaker ပြုတ်ကျတာ ဖြစ်သွားမှာမို့ပါ။ ပြောသာပြောရတာ နံရံတွေမှာ2pin Socket တွေသုံးနေတဲ့၊ တစ်အိမ်လုံးကို Earth Wire ဖြန့်ကျက်ထားခြင်းအလေ့ မရှိသေးတဲ့ ကျနော်တို့ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့တော့ အလှမ်းဝေးနေဆဲလို့မြင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ရှိမှန်း ဓါတ်လိုက်တတ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ လုပ်နေကြတာ/လုပ်နေရတာတွေ၊ “မီးပူကိုယ်ထည်က ဓါတ်လိုက်နေတာလေးများ ပလပ်ခေါင်းပြောင်းပြန်လှည့်ထိုးလိုက်ရင် ပြီးနေတာပဲ” ဆိုတဲ့ “ဒါလေးများ” စိတ်ဓါတ်တွေ နဲ့တော့ ဓါတ်လိုက်သေဆုံးမှုဆိုတာတွေ ကြုံနေရဦးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြတ်ကျနေတဲ့ ဓါတ်ကြိုးကတဆင့် ဓါတ်လိုက်လို့သေဆုံးရတယ် ဆိုတာကိုတော့ A.G.T.I (E.P) တစ်ယောက် G.T.I ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေပါ။ ဓါတ်တိုင်ပေါ်ကို ဓါတ်ကြိုးတွေတင် သွယ်တန်းကတည်းက အဲဒီ့ကြိုးတွေ ပြတ်ကျနိုင်တဲ့အခြေအနေ၊ သစ်ကိုင်းကျိုးကျတာ၊ သစ်ပင်လဲတာ၊ လေပြင်းတိုက်တာ စတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့် ဓါတ်တိုင်လဲကျနိုင်တဲ့ သဘာဝတွေကို သိထားပြီးသားပါ။ ဓါတ်ကြိုးပြတ်မကျအောင်၊ ဓါတ်တိုင်မလဲအောင် ဘယ်လိုမှရာနှုန်းပြည့် အာမခံနိုင်တာမဟုတ်လို့ ကြိုးပြတ်ကျခဲ့ရင်၊ ဓါတ်တိုင်လဲခဲ့ရင်ဆိုတဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားပေးရမှာပါ။
ပြတ်ကျနေတဲ့ ဓါတ်ကြိုးကနေ အန္တရာယ်မပေးနိုင်အောင်လို့ ဓါတ်တိုင်ပေါ်မှာ သွယ်ထားတဲ့ ဓါတ်ကြိုးတွေရဲ့ ဘေး(သို့) အောက်မှာ မြေဓါတ်ချထားတဲ့ ကွင်း/တန်း (Earth Ring (or) Earth Bar) တွေ ဓါတ်တိုင်တိုင်းမှာ တပ်ဆင်ထားပေးရမှာပါ။ ထရန်စဖေါ်မာကနေ ဓါတ်တိုင်ကိုရောက်သွားအပြီး ဓါတ်တိုင်ရဲ့အထွက်ဘက် (နောက်တစ်တိုင်ကို သွားတဲ့ဘက်) တဖက်တည်းမှာပဲ သတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်း စံနစ်တကျ တပ်ဆင်ပေးထားရမှာပါ။ ကြိုးပြတ်ကျတာနဲ့ တပြိုင်နက် အဲဒီ့မြေဓါတ်ချထားတဲ့ (Earth Ring (or) Earth Bar) နဲ့ထိပြီး ထရန်စဖေါ်မာ အထွက်မှာ တပ်ထားရမယ့် Circuit Breaker ပြုတ်ကျ (၀ါ) ဖြူးစ် (Fuse) ပြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဓါတ်တိုင်ကနေ အိမ်ကိုသွယ်ယူတဲ့ ဆားဗစ် (service ) ကြိုး ပြတ်မကျဖို့ကိုတော့ အဲဒီ့ဝါယာကြိုးကို ထမ်းထားရတဲ့ ၀န်ထမ်းကြိုး (Bearer Wire) ကို လိုအပ်တဲ့ ဆိုဒ်ထက် မသေးတဲ့ သွပ်ရည်သုတ် သံကြိုး (Galvanized Iron) GI ကြိုး သုံးသင့်ပါတယ်။ ဆားဗစ်ကြိုးရှည်လွန်းရင် ကြားခံဒေါက်တိုင်တွေ ထည့်ပေးရပါမယ်။ဓါတ်တိုင်ပေါ်က ဆားဗစ်ကြိုး အစမှာ Aerial Fuse တတ်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်( တတ်မထားတာတွေ တွေ့နေရလို့ပါဗျို့ )။ လုပ်ရကောင်းမှန်းမသိတာရယ်၊ သိပေမယ့် တကယ်လိုက်မလုပ်ပဲ “အဖြစ်” သွယ်တန်းတပ်ဆင်နေလို့ကတော့ ချို့ယွင်းပျက်စီးတဲ့အခါ အကာအကွယ်မရတော့ဘဲ အသက် အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံရမှာပါ။
မြင်နေမိတဲ့တစ်ချက်ကတော့ ရှိပြီးသား အစဉ်အလာကောင်းတွေကို ထိန်သိမ်းဖို့အားနည်းနေတာ၊ ရှိပြီးသား လျှပ်စစ်ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးမှုအားနည်းနေတာ၊ “ရေဘူးပေါက်တာ မလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲ လိုချင်တယ်” ဆိုတဲ့ကာလကတည်းက အကျင့်ပါလာခဲ့တဲ့အတိုင်း ဘူးပေါက်ကြီးနဲ့ရေခပ်နေဆဲဖြစ်နေတာပါပဲ။
ကဲ.. ကဲ….. ဂဇက်ရွာကြီး စည်ပင်ဝပြောပါစေ။ ဂဇက်ရွာသူရွာသားအပေါင်းနဲ့ ဖတ်ရှုသူအပေါင်းလည်း လျှပ်စစ်ဓါတ်လိုက်ခြင်းအန္တရာယ်မှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။
ဒေါက်ချာမောင်ပေ ၏ စေတနာ
ဖုန်းအားသွင်းဖို့ ဖြစ်စေ ၊ ထမင်းပေါင်းအိုးအတွက်ဖြစ်စေ ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးမျိုးကို အသုံးပြုဖို့ ဖြစ်စေ ၊ မည်သည့်အတွက်ပဲဖြစ်စေ ပလက်ထိုးတော့မည် ဆိုလျှင် မိန်းအရင်ချပါ ၊ ပြီးလျှင်ပလပ်ထိုးပါ ၊ ပြီးလျှင် မိန်းပြန်တင်ပါ
ဟော… သင်လုံးဝ ဓါတ်လိုက်တော့မည် မဟုတ်ပါ
တစ်ခုတော့ ရှိသည် ၊ မိန်းဘုတ်ခုံရှိသည့်နေရာသည် သံမံတလင်း မြေသားဆိုလျှင်တော့ အပေါ်က ပရော်ဖက်ဆာ ဆွယ်တော်ရွက် ရေးသလို ဖိနပ်စီးသွားပါ
Comment လေးနဲ့ အားဖြည့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ ပလပ်ပေါက်မထိုးခင် ခလုပ်ပိတ်သင့်သလို ပင်ပွားပလပ်တွေအများကြီး မဆက်သွယ်သင့်တာလေးလည်း ရေးပါဦး… ကျနော်လည်း ကြိုးစားပြီးရေးပါဦးမယ်။
အခန်းဆက်ရေးစေချင်ပါတယ် ။ကျနော်တို့ နိုင်ငံက အများစု
ကဗဟုသုတနည်းပါတယ် ။ ကျနော့အလုပ်ထဲက မိန်းကလေး
တချို့ ဆိုရင် ဘယ်အရာမျိုးကို လျှပ်စစ်စီးပြီး ဘယ်အရာဘမစီး
လဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းမသိပါဘူး ။
ဆက်ရေးပါဦး မျှော်နေပါ့ မယ်
ပြတ်ကျနေတဲ့ ဓါတ်ကြိုးကတဆင့် ဓါတ်လိုက်လို့သေဆုံးရတယ် ဆိုတာကိုတော့ A.G.T.I (E.P) တစ်ယောက် G.T.I ကျောင်းဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ လုံးဝလက်မခံနိုင်ပါဘူး။ လုံးဝမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စရပ်တွေပါ။ …………………………………………………………………………..
ကြိုးပြတ်ကျတာနဲ့ တပြိုင်နက် အဲဒီ့မြေဓါတ်ချထားတဲ့ (Earth Ring (or) Earth Bar) နဲ့ထိပြီး ထရန်စဖေါ်မာ အထွက်မှာ တပ်ထားရမယ့် Circuit Breaker ပြုတ်ကျ (၀ါ) ဖြူးစ် (Fuse) ပြတ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်ပါပဲကိုစွယ်တော်ရေ….အဲဒီလိုဓါတ်လိုက်သေရင် MEPE ကိုတရားစွဲရမှာဗျ….
ဟိုးစစသွယ်တုံးကတော့ Earth Ringတွေ ဓါတ်တိုင်တိုင်းမှတွေ့ပါတယ်…အကြောင်းကြောင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတာကိုပြန်ပပြင်ကြတာဗျ…
ကျတော့် အိမ်နားကဓါတ်တိုင်မှဆို Earth Ring တော့ရှိပါရဲ့ ..အရင်းကပြတ်ပြီး …ဓါတ်ကြိုးအလယ်ကောင်ကိုရောက်နေတယ်……
ပညာ ရှင်တွေ ၀ိုင်းဖြည့် ပေးကြပါဗျို့  … ဒီလို ပိုစ့် ဒီလို comment အတွက် ဗရာဗို ပါ။
ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ ဗဟုနဲ့သုတအတွက် ကျေးဇူးအထူးပါဗျို့
အခန်းဆက်တွေ များများရေးနိုင်ပါစေ …
ကိုစွယ်တောရွက်ရဲ့စေတနာအပြည့်နဲ့ ပြောပြပေးတဲ့အတွက် အရမ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်..
လူတိုင်းသိထားသင့်၊ နားလည်သင့်တဲ့အတွက် အကို့ရဲ့ Post ကို Share ပါရစေနော်…
နောက်ထပ်လည်း ဆက်ရေးပါဦးနော်. စောင့်မျှော်အားပေးနေပါ့မယ်….
လက်မ ရှာမတွေ့လို့ မန့်သွားပါတယ်။
ရွာအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့သူတွေ လွယ်လွယ်နဲ့ထွက်မသွားအောင် ရတဲ့နည်းနဲ့ ဖမ်းထားပါ။
ကျုပ်ငယ်စဉ်ကတော့ အလွန်လျှပ်စစ်အန္တရယ်များလှတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်။ အလုပ်သမားအားလုံးပဲ ဓါတ်မလိုက်ဖူးသူ မရှိသလောက်ပါပဲ…။ ထိထိရောက်ရောက်မလိုက်တော့ သေတော့မသေဘူးပေါ့လေ..။ သေသေချာချာဓါတ်လိုက်လို့ မေ့မြောသွားသူတယောက်ကျတော့ ဆေးရုံပို့ရာမှာ ဆေးရုံမှာ ဒီအတိုင်း (ဘာမှမလုပ်ပဲ) ထားတယ်။ နာရီဝက်လောက်အကြာမှာ သတိပြန်ရလာပြီး ရေတခွက်တောင်းသောက်ပြီး မကြာခင် ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းလာတယ်။
ဆိုချင်တာက ဓါတ်မလိုက်အောင် သတိပြုရမှာလဲ လိုအပ်သလို
ဓါတ်လိုက်တဲ့သူကို ဘယ်လိုပြုစုကုသရမယ်ဆိုတာလဲ (အနည်းဆုံး ဆေးရုံက၀န်ထမ်းတွေလောက်တော့) အသိပညာဖြန့်ဖြူးသင့်ပါတယ်။
ပုဂံဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်လိုက်မှု (နိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်သေသွားခဲ့မှု) တစ်ခုအကြောင်းကို ကိုထူးဆန်းတင်ပေးဖူးတယ်လေ။ အဲဒီ့ပို့စ်မှာ အဘဖေါတို့ ဆွေးနွေး ထောက်ပြထားခဲ့တာ ကောင်းမှကောင်း.. ရန်ကုန်မြို့တော်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ သတိပေးဆိုင်းဘုတ် မှာတော့
“မြွေကိုက်လျှင် ဆေးရှိသည်၊ ဓါတ်လိုက်လျှင် ဆေးမရှိ” လို့ကိုရေးပြထားတာခင်ဗျ။
ကိုစွယ်တော်ရေ မတွေ့တာကြာပေါ့။ ခုတော့ မြန်မာလို ကိုယ်တိုင်ရိုက်နိုင်နေပြီ ထင်ပါတယ်။ နောက်လည်း ဗဟုသုတလေးတွေ မကြာမကြာရေးတင်ပါအုန်း။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတာမို့သိပ်ကောင်းဗျာ..
မိုးရေစိုတဲ့ကိုယ်ကြီးနဲ့ကွန်ပူတာ ယူအက်စ်ဘီထိုး ရင် ကြင်နာတယ်..
ဖိနပ်မစီးပဲ ကွန်ပူတာထဲက ကလီစာတွေ ကိုင်ရင် ကြင်နာတယ်..
အကြင်နာလိုချင်တဲ့လူတွေ ဓာတ်တိုင်က ဓာတ်ကြိုးနှစ်ချောင်းကို တစ်ဘက်စီဆုပ်ကိုင်ပြီး တွဲလောင်းခိုနေ
အလဲ့..အလဲ့..မောင်ပေက နှာခေါင်းကလွဲပြီး ကျန်တဲ့နေရာမီးမလင်းဘူးတော့
ဘီဘီ တွေရဲ့ အပူကြောင့်
ရန်ကုန်မြို့ ရဲ့ လမ်းတွေ ညဆိုရင် မီးထွန်းစရာ မလိုလောက်အောင်
စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြသွားတာကိုဖတ်ရင်း စာသင်ကောင်းတဲ့ ဆရာကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်မှာလို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
လူတိုင်းသတိထားသင့်၊ မပေါ့သင့်တဲ့ အသိပညာ အကြောင်းလေး အတွက် တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ :-)
တလောက.. အိန္ဒိယမှာ.. လျှပ်စစ်မီးတွေပြတ်ပြိးလူ..သန်းရာချီဒုက္ခရောက်တယ်သတင်းထဲ.. ဖတ်လိုက်ရတယ်..
သူတို့. အင်ဖရာစရပ်ချာ ပြန်ပြင်ဖို့.. ဒေါ်လာ ၁ထရီလီယန်( ဘီလီယန်၁ထောင်) မကကုန်မယ်တဲ့..
မြန်မာပြည်ရဲ့.. ဘိုးတော်ဘုရားခေတ်က.. လျှပ်စစ်ကြိုးတွေ.. ဂရစ်ကြီးတွေပြန်လုပ်.. အင်ဖရာကိုပြန်လုပ်ရင်.. ဘယ်လောက်ကုန်မလည်း.. အစီအစဉ်ရှိမရှိ.. စသဖြင့်… သိချင်သား…
အနည်းဆုံးတော့.. အိမ်နီးချင်း..အိန္ဒိယမှာ.. ၁ထရီလီယန်ဈေးကွက်ကြီးပေါ်လာပြီ..
မြန်မာပြည်က.. စီးပွားရေး.. လုပ်တတ်ရင်.. မဟာအခွင့်အေ၇းပါ..။
အဲဒီမားကက်ကို.. မျှော်ထားသလား.. ကြေးနီကြေးဝါ..စတာတွေကို.. တိုင်းပြည်အင်ဖရာအတွက်ရယ်.. အိန္ဒိယအတွက်ရယ် ကုန်ချောလုပ်ဖို့များ.. တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနေတာရှိသလား..
(လျှပ်စစ်သုတထဲ.. ညှပ်ထည့်သတင်းပေးလိုက်တာ.. ဆောရီးနော..)
Govt eyes $1 trillion investment in Infra – Indian Express
http://www.indianexpress.com/news/govt-eyes-1-trillion…/992112 – India
Aug 23, 2012 – Govt eyes $1 trillion investment in Infra – Greater public and private … ports and power as India looks at investing USD 1 trillion in infrastructure …
Region	Voltage	Frequency
Australia	230 V	50 Hz
Brunei	240 V	50 Hz
China (mainland only)	220 V	50 Hz
Canada	120 V	60 Hz
France	230 V	50 Hz
Germany	230 V	50 Hz
India	230 V	50 Hz
Indonesia	127 V / 230 V	50 Hz
Japan	100 V	50 Hz & 60 Hz
Korea, South	220 V	60 Hz
Malaysia	240 V	50 Hz
Mozambique	220 V	50 Hz
Myanmar/Burma	230 V	50 Hz
New Zealand	230 V	50 Hz
Singapore	230 V	50 Hz
Thailand	220 V	50 Hz
United Arab Emirates	220 V	50 Hz
United Kingdom	230 V	50 Hz
United States of America	120 V	60 Hz
ဒီပို.လေး အတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုအညာတမာရေ. လျှပ်စစ်အကြောင်းကို သိတော့သိတယ် ဂဂနန မသိတော့ ရမ်းလုပ်နေတာ.. အခုတော့ သေသေချာချာ သိလိုက်ရပါတယ်… လူတိုင်းဂရုစိုက်သင့်တဲ့ အချက်တွေပါပဲ……..
အဲဒီလို အသိပညာ အတတ်ပညာ ထုတ်နှုတ်တင်ပြနိုင်စွမ်း ပြန်လည် မျှဝေ မှု ပြည့်ဝတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ကျွန်တော်တို. နိုင်ငံ အစိုးရရုံးတွေ မှာ အများကြီး လိုအပ်နေသေးတယ်ဗျာ…………
မပြောတော့ဘူး မပြောတော့ဘူး…………………..ပြောကိုးးးးးးးးးးးးးးမပြောချင်ဘူး (ဒေါ်လှလေးအသံဖြင့်)
ဘယ်နှာ ကိုအညာတမာ ဖြစ်နေရတုန်း ကိုရွှေတိုက်ရဲ့ .. အုပ်ထိန်းသူလက်ချက်နဲ့ များ မှုးနေတာလားး … :grin:
မြန်မာပြည်က Volt က ၁၆၀ မဟုတ်ဘူးလား .. :grin: နောက်တာနော် the best.
တားတား မွှားတွားဘာဒယ် ဦးထူးဆန်းရယ်… ပို.စ်တွေ တက်စ ရွာပြန်ဖွင့်စဆိုတော့ အပျော်လွန်ပီး စွတ်ရေးလိုက်တာ
ဟီးဟီးဟီး ဘွာတေး ဘွာတေး
အာ ကိုစွယ်တော်ရွက်ရေ ဆောရီးပါဗျာ………. ကျွန်တော် နာမည် မွှားသွားတာ….
ကိုစွယ်တော်ရွက် ဟီးဟီးဟီး ကိုအညာတမာဟုတ်ဘူး…….အဲလူ နှစ်ယောက် အမြဲမှားတယ်..
နောက်မွှားတဲ့သူ ရှိသေးတယ် ဦးမိုက် နဲ. ဦးဘလက်
မသိသေးတာတွေကို ဗဟုသုတအဖြစ်သိရလို့ …
ကိုစွယ်တော်ရွက် ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်… ပြီးတော့…
ကိုယ်ဝန်သည် မိခင် ဓာတ်လိုက်ခံ ရရင်
ဖတ်စရာ/ မှတ်စရာ ဗဟုသုတ အပြည့်ပါတာမို့
အိမ်မှာ တချို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ ပျက်ရင်
“လျှပ်စစ်စမ်းသပ်တံ Tester နဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရင် ကြေးဘား ၁ခုက မီးလင်းစေပြီး နောက်၁ခုက မီးမလင်းတာကိုတွေ့ရပါမယ်။ ”
ထိုသို့စမ်းသပ်တဲ့အခါ tester မီးသီးကျွမ်းနေသော(ပျက်စီး) စမ်းသပ်တန် နှင့် စမ်းသပ်ပြီး မီးမလင်းတာကို ၀ါယာကြိုးတွင် လျှပ်စီးမရှိဟု ထင်ကာ ကိုင်တွယ်မိရင်လည်း အန္တရယ်ရှိပါတယ် သေချာအောင် tester ကို ကောင်း မကောင်းအရင် စမ်းသပ် သင့်ပါတယ် … လျှပ်စစ်မီးဖို (ကွိုင်)ဖြင့် အသုံးပြုနေသော အိမ်ရှင်မများ မိမိ ချက်ပြုတ်နေသော နေရာတွင် သစ်သား ကြမ်းခင်းမဟုတ်ပါက ၄ လက်မ အမြင့် သစ်သားခုံ ပြုလုပ်၍ မီးဖို ကို အသုံးပြုပါ ခုံဖိနပ်စီးပြီး ချက်ပြုတ်လျှင်လဲ အတော်အတန် လျှပ်စစ် အန္တရယ် ကာကွယ် နိင်ပါတယ်….
ဟုတ်လားမသိ မန်းလိုက်ပြီ …….:P
ကျနော် ကျောင်းမှာတုံးကရော အခုသင်တန်းမှာပါ အမြဲမှာနေဆဲပါ။
“ လျှပ်စစ်သမား မှန်ရင်သွားလေရာ Tester ပါနေစေရမယ်၊ အဲဒီ Tester ကောင်းမကောင်း လဲနေ့စဉ်လိုလို စမ်းသပ်ပြီး ကောင်းနေစေရမယ် ” လို့ပေါ့၊ နောက်ရေးမယ့် Post တွေထဲမှာအလျင်းသင့်သလို ထပ်ရေးပါဦးမယ်နော့ …. ကျေး.. ကျေးပါ။
မတော်..မီးပျက်နေတာဖြစ်လို့.. လျှပ်စစ်အားမရှိ(မပြ)တာကို.. လက်နဲ့ကိုင်ရင်း.. လုပ်စရာလုပ်နေတုံး.. မီးပြန်လာရင်.. ဂန့်ဂန့်.. ဂန့်.. ဖြစ်မှာလည်း.. ရှိသေးတယ်နော…
အကူအညီတောင်းပေမယ့် မအားလွန်းလို့ နောက်ကျတာ ခွေးလွှတ်လိုက်ပါအုံး။
SHOCK ကို မုံရွာကလူတွေလို မမှတ်ဖူးဘူး၊ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်တာလေးတွေတော့ ရေးပေးပါမယ်။
ှS-Sweating (Profuse Sweating) ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
H-heart rate က ကျမသိသလောက် shock တွေမှာ မြန်လာတတ်ပါတယ်။
O-Oxygen ဖြစ်ပါမယ်။Oxygen ကျသွားတဲ့အတွက် ပြာနှမ်းသွားတာဖြစ်ပါမယ်။
C-cold and clammy extremities အဓိကအရေးပါတဲ့ အသည်းနှလုံး ဦးနှောက်စတာတွေဆီ သွေးပို့ဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ကလုပ်လိုက်တဲ့အတွက် လက်ဖျားခြေဖျားတွေ အေးစက်သွားတာပါ။
အကျိုးပြုသုတ ပို့စ်လေးတွက် ဘရာကြော်ပါနော။
ကိုစွယ်တော်ရွက် ရေ ဒီပို့စ် တင်တဲ့ နေ့ကတဲက ဖတ်မိပြီး ကိစ္စပေါ်လာတာနဲ့ မမန့်လိုက်ရဘူး
အခုမှ ပြန်တက်လာတော့ အတော်ဖြစ်သွားတယ်
ဖတ်မိသူတိုင်းအတွက် အကျိုးရှိတာမို့ ထပ်ရေးပါဦး များများရေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုပါရစေ
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်ရင် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ခေါ်လုပ်တယ်ဆိုတာက ခပ်ရှားရှား
ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ မလုံလောက်တဲ့ အသိပညာလေးနဲ့ ရမ်းသမ်း ကလိနေကြတာ အကျင့်ဖြစ်နေကြပြီ
ခေါ်ဘို့ ပညာရှင်ကလဲ ရှားပါးတယ် အိမ်တွေမှာ သုံးနေရတာကလဲ တရုတ်စက်မို့ တရက်နဲ့စုတ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေမို့ ခဏခဏပျက် ပျက်တိုင်းခေါ်ဘို့ ကလဲ မလွယ်တာနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲ မဖြစ်မနေကို ကလိကြရတာမို့ အခု လို ဗဟုသုတမျိုး သိထားရင် အန္တရယ်ဖြစ်နှုန်းနည်းသွားတာမို့ အများကြီး အကျိုးရှိပါတယ်
၀ါယာရှော့ဖြစ်လို့မီးလောင်ရင် ရိုးရိုးမီးသတ်ဆေးဘူးမသုံးပဲ chemical မီးသတ်ဆေးဘူးဆိုတဲ့အမှုန့် ကိုသုံးရပါမယ်။ ဒီမီးသတ်ဆေးဘူးတွေကလျှပ်ကာပြီး တခါသုံးရင်တဘူးကုန်အောင်သုံးရတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ ၀ါယာရှော့ဖြစ်လို့မီးလောင်ရင်ရေနဲ့မသတ်ရပါဘူး။ ရေကလျှပ်ကူးမို့ပိုဆိုးတတ်တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။ အရေးပေါ်ဆိုသဲကိုသုံးရတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
ရိုးရိုးမီးလောင်ရင်စလောင်ခါစဆို အရေးပေါ်အခြေအနေမှာ အကျီ င်္ (သို့) ပုဆိုး (သို့) ဂုံနီအိတ်ကို ရေ၀အောင်စွတ်ပြီး မီးကိုရိုက်အုတ်တာဟာထိရောက်တဲ့နည်းတခုဖြစ်ပါတယ်။ မီးလောင်လို့ရေနဲ့ပက်ရင်လည်း သဲ (သို့) မြေကြီးနည်းနည်းထည့်ပက်တာပိုထိရောက်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
အိမ်ရှင်မများ လျှပ်စစ်ပေါင်းအိုး၊ လျှပ်စစ်ဟင်းချက်အိုး၊ လျှပ်စစ်ရေနွေးအိုးများနှင့်
လျှပ်စစ်မီးပူများ အသုံးပြု့လျှင် တစ်ခါတစ်ရံ အနည်းငယ်ကျင်ရုံမျှဓာတ်လို့ခံရပါက
ပလပ်ခေါင်းကို ဘယ်ညာလှည့်၍ ပြောင်းတပ်ပါက ဓာတ်မလိုက်တော့ကြောင့်
ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်၍ သိရှိထားပါသဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
သင်တန်းချိန်ရှိနေလို့ တနင်္ဂနွေမနက် လက်ဖက်ရည်မ၀ိုင်းရတာတောင် ကြာပေါ့။ ဆုံကြဦးစို့လေ.. အဲဒီ့ဓါတ်တိုင်လည်း ကျနော့်ကိုပြပါဦး.. သူကြီးဆီလှမ်းပို့ပေးချင်လို့ (ဓါတ်ပုံ……ဓါတ်ပုံ)
အရီးခင်လတ်၊ ကိုဆာမိ၊ M လုလင်၊ Moe Z ၊ Tin Tin ၊ Kolumbus ၊ Pooch ၊ Ko Out Of ၊ Candle နဲ့ မနိုဗွီတို့လည်း ရွှင်လန်း ချမ်းမြေ့ပါစေ၊ လူမှားတတ်တဲ့ ကိုရွှေတိုက်ရောပေါ့… (အရပ်ချင်းတူလို့ မှားတာနေမှာနော်)
မမပဒုမ္မာ၊ Heart Beat ကို အမှန်ပြင်ပေးတာရော ကွက်လပ်ဖြည့်ပေးတာရော အတွက် ကျေးဇူးပါခင်ဗျ၊
၁၉၉၅- ၉၆ လောက်ကတဲက မှတ်သားထားခဲ့တာမို့ နဲနဲ လွဲနေမှန်းတော့ သိတယ်။ K က တိုက်ရိုက်ယူတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ မှတ်မိတယ်၊ ဘာ မှန်းသာမသိတော့တာ။
လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပြီး အသိပညာ အတတ်ပညာ ဗဟုသုတ ပေးတဲ့ ပို.စ်ပါ..
အသက်အန္တရာယ်အတွက်လဲ အရမ်းကို ထိရောက်တဲ့ ကာကွယ်မှုတွေနဲ. အသိ ကိုပေးပါတယ်…
ဒီလို ရေးဖို. နှစ်နဲ.ချီတဲ့ အတွေ.အကြုံ လေ့လာမှုနဲ. တင်ပြတတ်မှု ကို လေးစားချီကျူးစရာဖြစ်ပါတယ်..
ပညာရှင်အဆင့် ပို.စ်ကောင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရွှေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်